Ụlọ ọrụ na-enye nri chocolate, onye na-eweta nri chocolate - igwe LST
Usoro nri chọkọleti bụ ọkwa kachasị mkpa na ahịrị mmepụta chọkọletị niile, ọ bụ akụrụngwa dị mkpa na mmepụta chọkọleti.
Kedu ihe bụ usoro nri Chocolate?
N'ezie, mgbe anyị malitere oru ngo nke mmepụta chocolate, ihe mbụ bụ nkwenye na ndị ahịa "Ị chọrọ usoro nri?" na mgbe ahụ anyị nwere ike ikwu nkọwa ndị ọzọ na ndị ahịa, dị ka chocolate nri usoro bụ mkpa akụrụngwa na dum mmepụta. .
Usoro nri chọkọleti gụnyere ụdị igwe abụọ: nke mbụ bụ chọkọleti na-ejide tank, tank anyị na-ejide chọkọletị dị na mmepụta chọkọletị dị mkpa, na-ejikarị eme ihe mgbe ị na-echekwa ihe nchekwa chọkọletị siri ike nke ọma, na-emeju mmepụta chọkọleti chọrọ teknụzụ chọrọ. , adapts na-aga n'ihu mmepụta request.it na-agụnye chocolate ejide tank na mgbapụta twp akụkụ, na tank ikike nhọrọ bụ 500L,1000L,2000L; na ike bụ 7KW,7.5KW na 9 KW, n'ozuzu, anyị ga-akwado ndị kwesịrị ekwesị ike dabere. na arịrịọ ikike mmepụta nke ndị ahịa anyị, ka ikike nrụpụta dị ukwuu, ka ikike ahụ dị ukwuu. mgbapụta ahụ dị ka njikwa tank, anyị ga-adaba na mgbapụta kwesịrị ekwesị maka tankị na-ejide chocolate.
Akụkụ nke abụọ bụ tankị na-agbaze abụba, mgbaze chọkọletị anyị na tankị igwe na-ekpo ọkụ site na 75kg ruo 6000kg, anyị nwekwara ike mee ya dịka mkpa pụrụ iche gị si dị.
The igwe anaghị agba nchara tank nwere a Sanwichi na mgbe niile okpomọkụ akara, na ike ịgwakọta na scraper ngwaọrụ n'ime.
Kedu ihe eji usoro nri chọkọletị eme ihe?
A na-echekwa tankị chọkọleti dị mma nke na-eji usoro njikwa okpomọkụ na-achịkwa mgbe niile, nke a na-ejikarị dị ka akpa nchekwa ọkụ iji chekwaa syrup chocolate mgbe egweri, iji mezuo ihe teknụzụ chọrọ na arịrịọ na-aga n'ihu.
The abụba agbaze tank nwere ike ji mee ihe maka agbaze, nchekwa na okpomọkụ ịnọgide na-enwe maka chocolate, axunge na yiri mkpuchi material.Other components gụnyere a mmiri interlayer kpo oku akụrụngwa, ike br ji iro mpụga kpo oku, okpomọkụ ichebe na mkpuchi.
Kedu ihe bụ isi atụmatụ nke usoro nri chocolate?
Mmanụ aṅụ Chocolate: mkpuchi mkpuchi mkpuchi okpukpu abụọ/Sistemụ okirikiri mmiri ọkụ/Ọnụ ụzọ ámá ụdị mkpali Paddle/Full 304 igwe anaghị agba nchara.
Tank na-agbaze abụba: Ngwa kpo oku interlayer / Sistemụ okirikiri mmiri ọkụ / ikike SS dị elu
Mmanụ na-agbaze abụba